नाकैमा फूली भन्दै गाउने मेलिनाकै नाकमा किन छैन फूली ? - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
नाकैमा फूली भन्दै गाउने मेलिनाकै नाकमा किन छैन फूली ?
२० पुष,२०७३ | Forseenetwork
गायिका मेलीना राई अहिले प्राय संगीत प्रेमीहरुको ध्यान तान्न सफल छिन् । उनी सानै उमेरमा सफलता पाउने गायिकामा पर्छिन् । सुमधुर स्वरकी धनि मेलीना अहिले निकै व्यस्त छिन् । लगातार रेकर्डिङ, कार्यक्रमहरु परेकी मेलिनालाई मिडियालाई समय दिन धौ धौ छ । जसो तसो समय मिलाए हामीकहाँ आईपुगेकी उनले आफ्ना प्रोफेशनल र पर्सनल केही कुराहरु सेयर गरेकी छिन् । एक कार्यक्रममा उनलाई हामीले फूली किन नलगाउन भएको ? भनेर सोध्यौँ । यसको जवाफमा उनले आफूलाई फूली मन नपर्ने बताईन् । बुवाआमाले सानै उमेरमा नाक छेडिदिनु भएको भएपनि उनले फूली फिटिक्कै मन नपर्ने भएका कारण नलगाएकी रहिछन् । मेलिनाले शिरैमा शिरबन्दी, नाकैमा फूली बोलको गीत भने गाएकी छिन् । तर वास्तविक जीवनमा उनलाई फूली मन पर्दैन । समयको परिवर्तनसँगै मेलिना मात्रै हैन अहिले प्राय युवतीहरु फुली लगाउँदैनन् । फूली नेवार । शेर्पा समुदायमा लाईन्न तर अन्य समुदायको सस्कारसंग जोडिएको छ ।
फिल्म रिजेक्ट गरेकी सुन्दरी गायिका मेलिनालाई प्रेम प्रस्तावको ओहीरो
सधैँ हाँसीरहनु पर्छ भन्ने गायिका मेलीना राईले १२ बर्षको उमेर देखि गीत रेकर्डिङ्गको अनुभव संगालेकी छिन् । उनले पहिलो पटक १२ बर्षको उमेरम..
प्रेम प्रस्ताव आउँदा के गर्छन् गायक गायिका ?